WikiLeaks – မြန်မာနဲ့ဆိုင်တာပါခင်ဗျ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » South East Asia » WikiLeaks – မြန်မာနဲ့ဆိုင်တာပါခင်ဗျ
WikiLeaks – မြန်မာနဲ့ဆိုင်တာပါခင်ဗျ
Posted by kai on Dec 1, 2010 in South East Asia, Think Tank |3comments
WikiLeaks - မြန်မာနဲ့ဆိုင်တာပါခင်ဗျ
၀ိကီလိခ့်ကနေ မြန်မာနဲ့ ပါတ်သက်တာ ဘာတွေထွက်သလည်း အချိန်ရရင်ရသလောက်ရှာနေပါတယ်..။ အဲဒါတခြား မြန်မာနဲ့ဆိုင်တာလေးတွေတွေ့ရင် တင်ကြပါဦး.။
အခုလောလောဆယ်တော့ .. မြန်မာပြည်အပေါ် ယူအက်စ်ရဲ့ အင်ထရက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ခန့်မှန်းနိုင်မဲ့ ဇယား-ပုံတခုတင်ထားပါမယ်..။
အ၀ိုင်းရဲ့အရွယ်က စာတွေအ၀င်ထွေက် ပမာဏဖြစ်ပြီး အရောင်ကတော့ .. အပြာဆို ထိပ်တန်းလျှို့ ဝှက်ဖြစ်ပြီး ..အစိမ်းကတော့ ..သာမန်ရုံးတွင်းစာပေါ့..။
ဇယားအရ ..မြန်မာပြည်အပေါ် ယူအက်စ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုဟာ ၂၀၀၁ကနေခုန်တက်လာတာတွေ့ရပြီး .. ဘေးနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် အရောင်ရင့်တာမို့ .. အရေးကြီးတဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်.။ ဒါတောင် မြန်မာပြည်ဟာ ယူအက်စ်သံအမတ်အဆင့် မထားရှိတဲ့ တိုင်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်..။စကေးအရ တွက်ကြည့်ရင် ..မြန်မာပြည်ကို မြောက်ကိုရီးယားထက်အလေးထားဟန်ရှိပြီး.. အရှေ့ တောင်အာရှမှာလည်း ထိပ်ဆုံးရှိနေတယ်လို့ ထင်ကြောင်းပါ..။
သတိတော့ ထားကြပေါ့နော..။ ယူအက်စ်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးစံနစ်အရ ၀ိကီလိခ့်ကစာတွေကို စောင့်ကြည့်နေပြီဖြစ်တာမို့ .. အရမ်းကာရောသုံးသပ်တင်ပြနေရင်လည်း .. သူတို့ရဲ့ စက်ကွင်းထဲဝင်သွားမှာ စိုးရပါတယ်..။ ဆိုလိုတာက .အင်တာနက်တခုလုံးကို အခုအချိန်တွေဆို .. စကန်င်လုပ်နေလာက်ပါပြီလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
အင်း…….ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါလည်း ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဗျ။။ခိုင်ကပိုမြန်တယ်နော်။ဟီး ဟီး……။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခိုင်ရေ။အသေးစိတ်ပြောပြထားလို့ ရေးသားနေမဲ့ ဘလော့ပ်တွေအတွက် စဉ်ချေနိုင်တာပေါ့နော်။
ပြောမနေပါနဲ့တော့ ဦးခိုင်ရယ်၊ ကိုကြောင်ကြီးခင်မျာ တနေ့ကို နှစ်ဆဲ့လေးနာရီလုံးလုံး ဒါတွေပဲစောင့်ကြည့်ရ၊ အောက်ကတက်လာတဲ့ ထူးခြားသတင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို မှတ်သားရ၊ အရေးကြီးရင် အိမ်ဖြူတော်ကို သတင်းလှမ်းပို့ရနဲ့ အားချိန်ကို မရှိပါဘူး။ မန်းလေးဂေဇက်တောင် သံယောဇဉ်ရှိလွန်းလို့သာ အချိန်လုဖတ်တာ။ သိတယ်မဟုတ်လား ကိုကြောင်ကြီးက အက်ဖ်ဘီအိုင်က စီနီယာ အေးဂျင့်လေ။ မကြောက်ပါနဲ့နော် ဗိုလ်အောင်ဒင် ဘောင်းဘီချွတ်တာ ရေချိုးမလို့ပါ၊ ငှဲငှဲငှဲ…
¶5. (S) MM Lee said he asked Deputy Chief of the People’s Liberation Army (PLA) General Staff Ma Xiaotian what China can do about North Korea. General Ma’s Delphic answer was that “they can survive on their own.” MM Lee said he interpreted this as meaning that even if China cut off aid, the DPRK leadership would survive. This isaleadership that has already taken actions like killing ROK Cabinet Members in Burma and shooting downaKAL flight. If they lose power, they will end up facing justice at The Hague, like Milosevic. They have been so isolated for so long that they have no friends, not even Russia. They have not trusted China since the Chinese began cultivating ties with the ROK, given China’s interest in attracting foreign investment, he said. The Deputy Secretary noted that the DPRK could haveafair and attractive deal if it would change its approach. If not, North Korea facesachange of course by the United States, the ROK and Japan. MM Lee expressed worry about the effect on Iran if the DPRK persists. MM Lee said he believes the DPRK can be contained and will not proliferate, but Iran has very high ambitions, ties to Shiite communities outside Iran, and oil wealth.